Hisolo ny GNU / Linux ve ny GNU / Hurd? | Avy amin'ny Linux
@Jlcmux | | Fitsinjarana, GNU / Linux, hafa
Androany dia namaky ireo lahatsoratra voalohany tao amin'ny bilaogy aho ary namaky zavatra izay nilaza ara-bakiteny «Io ve no ho fiandohan'ny faran'ny Linux ho toy ny kernel? Ho avy ny GNU / Hurd«, Ary tena nahasarika ny saiko izany, zavatra izay nanomboka novakiako ary hitako fa efa misy tetikasa lehibe toa Arch hurd y Debian GNU / Hurd.
Ao amin'ny vaovao dia milaza izany ho an'ny kinova Wheezy, Debian dia handeha hampiasa hoy Kernel. Tsy mbola zava-misy io. Fa raha misy kinova (Amin'ny 32 Bititra fotsiny) de Debian toy ny amin'ny Arch Linux, Gentoo ary ny fizarana hafa miaraka amin'ity kernel ity.
Fa inona izany GNU / Hurd izany?
GNU / Hurd kernel novolavolaina ho an'ny FreeBSD (Fomba iray hafa an'ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny resaka Operating Systems) fa miaraka amin'ny fahazoan-dàlana GPL, tsy toy ny FreeBSD's izay BSD ary mamela ireo izay mivoatra miaraka aminy hanova ny fahazoan-dàlana ho iray tsy andoavam-bola.
Arak'izany, ny fampivoarana an'io kernel io dia nanjary mora kokoa satria ny fanovana ny iray amin'ireo mpizara mikraoba ireo dia tsy hisy fiantraikany amin'ny firafitry ny hafa ka hialana amin'ny lesoka tsy ampoizina amin'ny serivisy hafa.
Inona ny hevitrao? GNU / Linux sa GNU / Hurd?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Hisolo ny GNU / Linux ve ny GNU / Hurd?
Matias (@ W4t145) dia hoy izy:
Izaho dia nino foana fa ny andro GNU / Hurd dia azo atao, ny tiako holazaina dia ny ho azo iainana ary azo ampiasaina 100%, izany no ho tsara indrindra !, Na dia afaka manova izany aza. Na dia somary lavitry ny fanatanterahana azy aza isika, raha jerena ny fahasarotany.
Valiny tamin'i Matias (@ W4t145)
Fantatro fa maro amintsika izay mamoaka lahatsoratra eto dia tsy mpanao gazety na mpikaroka, na izany aza, mieritreritra aho fa ny fanamarihana sasany toy izao dia tokony hohadihadiana lalina kokoa na farafaharatsiny mitanisa loharanom-baovao marim-pototra ...
Zavatra mora toy ny mandeha amin'ny wikipedia:
Ary zahao ny pejy ofisialy ary arosoy izany ...
GNU / Hurd dia kernel novolavola ho an'ny FreeBSD
Diso tanteraka izany. GNU / Hurd dia kernel mifototra amin'ny match namboarina ho an'ny rafitra GNU, tsy ho an'ny FreeBSD, tsy ho an'ny rafitra hafa. Raha ny tena izy dia ny sombiny ihany no tsy ahitan'ny GNU manana ny rafitra fandidiana maimaimpoana izay notadiavin'izy ireo tamin'ny 1984, rehefa noforonina ilay fikambanana. Saingy tao amin'ny Linus Torvalds dia namorona kernel antsoina hoe Linux izy ary ny sisa amin'ny tantara dia efa fantatsika rehetra.
Tsy ilaina ny milaza fa tsy manazava zavatra hafa. Tokony hofenoinao ny fanazavana manazava, farafaharatsiny, fa i Hurd dia manaraka ny maritrano microkernel izay ny "daemon" tsirairay dia mpizara tsy miankina iray izay manatanteraka ny asany ary ny asany ihany (ny tsy fitovizany amin'ny Linux dia ity dia mpizara tokana iray izay mandray fikarakarana ny zava-drehetra, fa ao Hurd kosa misy maro).
Fantatro fa tsy nametraka rohy aho, ny tsirairay izay mitady ny voambolana raha te-hanitatra fampahalalana bebe kokoa izy 😛
oO Nanoratra ny zavatra microkernel aho oo tsy fantatro izay nitranga: X
Efa nolazaiko fa tsy mety ho toy izany 😛
Ary ny zavatra ratsy indrindra dia ny tsy ahafahan'ny olona manova azy 🙁
Mieritreritra aho fa tsy maintsy hanova azy ny admin iray hahaha
Etsy andanin'izany, ny zavatra FreeBSD dia tokony hovaina 🙂
Amin'ity indray mitoraka ity dia izaho no nanitsy ny lahatsoratra ary tsy nahita zavatra nolazainao akory aho ... time
Fa ao amin'ny Linus Torvalds
Fa ao amin'ny 91 Linus Torvalds
Taloha kelin'ny "Araka io dia lasa mora kokoa ny fivelarana ity kernel" 🙁
Malio dia hoy izy:
Ary raha ny marina dia tsy GNU / Hurd izany, fa Hurd tsotra izao, ny GNU dia be loatra, satria ny voan-tsavona Hurd sy Linux ihany no resahina fa tsy ny rafitra fiasan'ny GNU / Hurd na GNU / Linux.
Mamaly an'i Malio
Hitako Hurd feno kokoa.
Amin'ny taratasy eny. Amin'ny fampiharana, aorian'ny 20 taona, i hurd dia mbola eo amin'ny dingana alohan'ny alfa ary Linux hitanao ny misy azy 😉
Marina mihitsy! Mametraka perla kely amin'ny fiara foana izy ireo ary nanomboka ela ny hazakazaka. Rehefa vonona ny fiara ary ho eo amin'ny tsipika fahatongavana ny olon-drehetra.
Toa "famitana" samihafa no resahan'izy ireo.
Heveriko fa kikl1n dia manondro ny "feno" avy amin'ny "teorika boribory" ary Annubis ho "feno" hatramin'ny vita.
Ny voalohany dia amin'ny hevitra sy famolavolana ary tsy esorina izany raha tsy manjavona.
Ny faharoa dia resaka toe-javatra iainana, ary i Hurd dia tsy nahazo akory ny fandraisana anjara sy ny fanohanana nananan'ny Linux tao anaty nofinofisiny.
Toa feno kokoa i Hurd fa amin'ny tranokala hafa miresaka momba ny lohahevitra ambaran'izy ireo fa tsy vita ny fivoarany satria sarotra be ny firafitry ny voan-kernel, raha tadidiko tsara ny olana dia mitoetra ao amin'ireo antsoina hoe kofehy, tsara raha ny kernel roa no nisy iray nanampy ho an'ny iray hafa, indrindra satria vao tsy ela akory izay no nahazo ny mpandresy loka Nobel izay nahita fomba hafa hamoronana algorithma sarotra kokoa noho ireo ankehitriny, izay mety hahatonga ny fanaovana computing zavatra be pitsiny kokoa ary mety ho latsaka kely ny valan-kazo linux ny fandrosoana ara-teknolojia vaovao.
GNU / Hurd / Linux, tiako izany! hehe ..
Tahaka ny fitiavako ny GNU / Linux, dia hanana fiaraha-miasa amin'ny GNU / Hurd aho.
Entanina aho hampiasa azy amin'ny distro toa an'i Trisquel na Dragora, hahafahako milaza fa 100% GNU no ampiasaiko 100% Maimaimpoana .. hehe ..
Raha ny teôria dia i Hurd no kernel maoderina tena miasa amin'izao fotoana izao. Amin'ny maha microkernel azy dia miaro ny rindranasa tsirairay, ny mpamily, ny rafi-drakitra ary ny fantsom-piraketana ho fiarovana ny fahatsiarovana voaaro ao amin'ny habaka ampiasain'ny mpampiasa izy io. tsy manana fidirana amin'ny Hardware izy ireo.
Noho izany, ny mpampiasa tsirairay dia afaka manana na mamorona ny sub hurd azy ary miasa tsy miankina amin'ny kernel, araka ny fantatra, tsy ilaina ny manana tombon-tsoa faka hanatanterahana ireo asa ireo (fahalalahana 0) satria izy ireo dia hatao eo amin'ny sehatry ny mpampiasa.
Manantena aho fa tsy teoria fotsiny io ary i Hurd dia miorim-paka araka izay azo atao ho an'i Wheezy
Raha ny fahalalako azy, Hurd dia azo ampiasaina amin'ny Squeeze ..
tsy mety ny zava-drehetra:
- wheezy dia tsy hivoaka miaraka amin'ny kernel hurd
- amin'ny sary voalohany dia mazava fa ampiasaina ny kernel linux
"GNU / Hurd dia kernel novolavola ho an'ny FreeBSD"
- ny kernel dia faingana, fa tsy gnu / hurd
- ho an'ny freebsd? dia hatrany am-piandohana novolavolaina hampiasaina amin'ny GNU
elif dia hoy izy:
+1, tsy fantatro izay noeritreretin'ity mpanoratra ity, tsy misy vaovao toa manakaiky ny zava-misy. ary ary koa, fohy dia fohy, tsy fantatro izay mitranga amin'ireo mason-tsivana amin'ny resaka publication.
Mamaly an'i elif
Manantena aho fa tsy hisolo ny linux izy io fa hiara-miaina kosa ho mpisolo toerana. Ny marina dia tiako hoheverina ho marin-toerana hampiasaina matetika. Heveriko fa tsy hanandrana azy aho alohan'izay, fa te hanandrana aho.
hahaha nisy olona nanandrana nametraka azy io saika tsy azo atao mihitsy
Raha ny marina dia heveriko fa lavitra ny tena hitranga. Linux no kernel tsara indrindra ankehitriny. Fa rehefa misy izy dia tsy hisalasala hampiasa azy aho.
Raha ny fahalalako azy, ny GNU / Hurd dia kernel (amin'ny fampandrosoana) noforonin'ny sy ho an'ny GNU.
Etsy ankilany, toa tsy mandroso amin'ny fanoloana ny Linux ilay tetikasa. I Stallman tenany ihany dia nanaiky fa miasa tsara ny Linux, ary amin'ny heviny, ny tokony hatao dia ny manolo ny kaody fananana ao anatiny miaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Hurd no kernel, GNU / Hurd no rafitra fiasa.
PS: (Tahaka ny Linux no kernekl ary ny GNU / Linux no ho Operating System).
angamba…. andro any aoriana…. mivoaka ny kinova hurd (izay ny kernel ihany, GNU / hurd no kernel miampy ny zavatra hafa rehetra xD) tokony hahaliana ny fitsapana ny fomba fiasany.
NAMANA dia hoy izy:
Heveriko fa ny churras dia afangaro amin'ny merino:
- Voalohany indrindra raha misy tetik'asa Debian hampiasa ny kernel FreeBSD miaraka amin'i Debian, saingy tsy misy ifandraisany amin'i Hurd: http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/
- Faharoa, Hurd dia kernel iray izay mbola kely hatramin'ny fahazazany ka taona vitsivitsy miala amin'ny kernel Linux izy. Ary koa, efa azo ampiasaina amin'ny debian efa ela izy io.
Mamaly an'i Rafiki
Maimaimpoana tanteraka? Izaho dia efa te-hahita azy misintona ny mpandefa haingam-pandeha 3D amin'ireo karatra horonantsary na zavatra toy izany. Tsy haiko, tiako ny hevitry ny mpizara mahaleo tena, fa raha te-ho tonga amin'ny tena zava-misy aho dia tsy maintsy mandray an-tanana ny fiarahamonina manodidina ny Linux, satria raha tsy izany dia tsy hahazo izany.
Raha mankany amin'ilay Linux isika dia tsy maimaim-poana tanteraka ary mijery azy io fa misintona ireo mpandefa haingam-pandeha 3D avy amin'ireo karatra horonantsary sy zavatra toa izany, ny tsy fahalalahana tanteraka dia tsy mendrika.
Ny fahiratan-tsaina raha mitady fampisehoana ianao na dia mahatonga anao te hitsambikina amin'ny Windows aza.
F'inona izany resahanao izany? raha toa ka aiza no misy ny kernel Linux? raha ny marina dia heveriko fa io no kernel ampiasaina indrindra ankehitriny.
Izy io dia amin'ny telefaona Android na takelaka android rehetra, ao amin'ny servera, amin'ny solosaina finday, amin'ny fitaovana (ohatra, ny ecosonogramako Samsung dia mampiasa kernel Linux 3.x), microsatellites, ny fitaovana rehetra misy Raspberry Pi. Nahoana araka ny eritreritrao no manana subsystem Linux ao amin'ny Windows 10 i Microsoft? Tsy lazaina intsony fa manana seza ao amin'ny Linux Foundation (Azure) i Microsoft.
Ny kernel Linux dia ao ambadiky ny biraonao sy ny takelaka ihany, fa amin'ny zavatra hafa rehetra kosa dia mifehy ny Linux.
Mety ho tolona mavesatra tokoa izay tsy maintsy ho entin'ny kernel HURD satria ny fototra rindrambaiko maimaimpoana dia henjana miaraka amin'ny foto-kevitry ny rindrambaiko mihidy (izay tsara amin'ny lafiny sasany) fa na izany aza ny kernel Linux dia zavatra iray rehefa mandalo ny taona dia mihamatanjaka izany. Izaho manokana dia hanandrana rafitra GNU / HURD ary hapetraka tampoka miaraka amin'ny fizarazako GNU / Linux, fa amin'ny ho avy angamba, tsy ho an'ny ankehitriny.
Miala tsiny, natao ho an'ny mpampiasa hafa io fanehoankevitra io, derp
Eny, hatreo an-tendan'i Torvalds aho, ary araka ny nolazaiko tao amin'ny bilaogy hafa, indray andro any dia hakatonako ny Kernel ary homeko ny Google ny zava-drehetra, na amin'ny orinasa sasany, rehefa manana solosaina PC aho dia hikorontana amin'ny Hurd voam
Raha te-hanidy ny kernel i Torvalds, dia tsy maintsy nahazo alalana avy tamin'izay rehetra nandray anjara tamin'ny fampandrosoana azy, zavatra tsy azo inoana 😛.
Tahaka an'izao tontolo izao, amin'ny farany ny olona sy ny vola dia manao izay tiany.
Raha tsy izany dia mariho fa raha noho ny "tokony ho izy" dia tsy tokony hanana kaody tompony mihitsy ny Linux ary jereo.
Debian dia nanambara tamin'ny androny fa hamoaka kinova miaraka amin'ny HURD ihany koa izy.
Toa azy manana kinova miaraka amin'ny Linux, FreeBSD iray hafa, (araka ny nomarihin'i Rafiki etsy ambony), (KfreeBSD) sns. nanana kinova (tsy marin-toerana) miaraka amin'ny kernel HURD mandritra ny roa taona farafahakeliny. Azonao atao ny misintona ny ".iso" ary manandrana azy amin'ny virtualbox, ohatra. Na manao fametrahana "standard" amin'ny tena hardware.
Tamin'ny fotoana farany nanaovako azy io dia efa ho ny antsasaky ny fonosana azony natokana ho an'ny Debian-GNU-Linux ported.
Ohatra, aorian'ny fametrahana rafitra fototra dia mametraha mpizara sary miampy Openbox na IceWM. Avy amin'ny LXDE raha tsy ny zava-drehetra, saika. Tsy afaka nilaza aho momba an'i Gnome sy i KDE.
Izay mampiasa Debian matetika dia tsy hanana olana amin'ny fanaovana andrana hametrahana azy.
Nisy nanandrana VATO? Tiako raha misy olona maneho hevitra raha haingana, miasa na marin-toerana. Na farafaharatsiny raha mendrika izany (tsy misy fanafintohinana).
Manohana an'i Tux aho izao.
Fantatro fa ny kernel novolavolain'ny GNU, fa ny fanontaniako dia raha misy tombony azo fantarina ho antsika olombelona izay liana amin'ny fampiasana fizarana fizahana, mandeha ho azy amin'ny birao, fandaharana, fanovana horonantsary / audio, sns. tsy refesina loatra isika amin'ny fomba fananganana distro?
1. Hurd dia kernel. Satria ao anatin'ny GNU io, milaza ny GNU / Hurd dia tsy mety, toy ny filazanao hoe tsotra Hurd dia diso. GNU io, satria izany no anaran'ilay rafitra.
2. Tamin'ny fihaonambe Stallman natrehiko dia nanontaniana anao tsara ity fanontaniana ity. Nilaza izany izy tiany izany fa tsy ilaina ny programa maimaimpoana hisolo programa maimaimpoana. Izany no mahatonga ny fanavaozana ny Hurd tsy ao anaty lisitra laharam-pahamehana ao amin'ny FSF.
Raha ny kernel ihany no resahintsika dia Hurd tsotra ny anarana marina, tsy manana anarana hafa izy io ary tsy rafitra izany, noho izany dia tsy azo antsoina hoe GNU.
Mazava ho azy fa ny rafitra feno dia ny GNU, saingy satria azo atao ny mampiasa ny GNU miaraka amin'ny voan-javatra samy hafa dia ilaina ny manavaka azy ireo amin'ny fomba sasany ary bebe kokoa amin'ity toe-javatra ity izay misy voan-javatra samihafa no tononina amin'ny fotoana iray ary ny fomba tsara indrindra dia amin'ny mamaritra azy io ho «System / Kernel», Izany hoe, GNU / Hurd, GNU / Linux, GNU / KFreeBSD, sns.
Raha tsy izany dia tsy hisy fomba hifankahazoana XD
Fa misy olona falifaly ary miteny amin'izay zavatra mihoatra an'i Linux i Hurd, satria noho ny olan'ny habakabaka dia tsy afaka manaporofo izany aho 🙁.
Inona koa, olona (izay nanandrana azy) no tokony hanao lahatsoratra momba an'i Hurd.
Afaka nanao izany aho tao anatin'ny herinandro vitsivitsy, saingy tsy manana fahalalana hanazavana izany aho.
Raha ny fahalalako azy dia tsy nandresy an'i Linux mihitsy i Hurd. Sarina sarotra ny manamboatra azy io. Azonao atao ny manisy fehin-kevitra vitsivitsy amin'ny famakiana vaovao momba ny nokleona monolithic sy micronuclei:
Raha ny fahitako azy dia misy adihevitra be momba azy io, satria ireo izay mamorona hurd dia tsy mamorona rafitra maimaimpoana hafa ary mamela irery an'i gnu miaraka amin'ny linux, angamba ilay hurd tsy tafiditra anaty gnu ary tsy tsapan'izy ireo izany.
GNU dia tetik'asa hamoronana sy hampivelatra ny rafitra fandrafetana natao sy noforonin'ny FSF (Free Software Foundation) ary ny fotony, izany hoe ny kernel, ny kernel-ny, dia hatry ny voalohany ity antsoina hoe HURD ity izay miorina amin'ny micro-core misy mpizara.
Linux dia fanampin-javatra taty aoriana izay nanana fanekena lehibe kokoa, kernel "makro" tsy noforonin'ny FSF, ny zava-nitranga dia ny Linus Torvals mpamorona azy no nanao patanty azy tamin'ny alàlana GPL noforonin'ny FSF ka malalaka sy malalaka izy, ary natsangana tamin'ny fandraisana anjaran'ny vondrom-piarahamonina iray.
Ny fahombiazan'ny Linux dia nitarika ny famoronana GNU / LINUX, toy ny zavatra rehetra mifototra na ny tontolon'ny malalaka sy malalaka no foronina.
Saingy ny fivoaran'ny GNU / HURD dia tsy miteraka olana, na loza mety hitranga amin'ny GNU / LINUX, izay misy ny fanahiny: safidy maro, fahalalahana betsaka.
Raha mamaky bebe kokoa ianao dia tsy hanao ireo hadisoana ireo amin'ny fieritreretana fa ny fampandrosoana ny HURD dia fanoherana ny GNU / LINUX. Na ny ratsy indrindra: lazao fa manolo-tena izy ireo amin'ny famoronana rafitra hafa izay tsy GNU, raha toa ka avy amn'ny GNU / HURD ny tetikasa GNU.
Ny GNU dia nanjary saika isaky ny fizarana sy fampandrosoana izay mitazona ny fanahin'ny GPL (lazaiko fanahy, satria fantatray fa tsy ny fizarana rehetra dia maimaim-poana sy misokatra 100%) ary mifototra amin'ny Non-Unix (hehe), izany hoe, antsoinay GNU mankany amin'ny fananganana fanahy GPL.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, satria ny FSF dia tsy tompon'ny tetik'asa GNU manokana satria malalaka sy misokatra, dia manangana sy manangana tetik'asa izay miafara amin'ny GNU ny vondron'olona; noho izany ny kernel Linux, noho izany ny tsy manam-petra ny rafitra amam-baravarankely na ny efijery na ny sary, ny birao feno, ny programa, ny fivoarana, izay iarahanay mivondrona amin'ny anaran'ny GNU mifandraika amin'ny akany Linux.
Raha tsy fantatro tsara dia azoko antoka fa mampifandray programa marobe ao anatin'ny GNU isika, satria GPL sy tsy unix mifanaraka fotsiny izy ireo, saingy heveriko fa ho lasa GNU fotsiny izy ireo rehefa miteny ny FSF fa GNU izy ireo fa tsy satria Non izy ireo -Unix mifanaraka sy GPL.
Noho izany ity tontolon'ny fahalalahana (misokatra, kopia, fivoarana) ity dia miteraka fahasarotana amin'ny fizarana, fivoarana, cores, birao, programa, izay indraindray heveriko fa mba hanatsorana antsika dia miteny hoe GNU / Linux ary satria heveriko fa hanana tena base GNU ihany koa izy ireo an'ny FSF.
Ny mari-trano micro-core dia mijery tsara kokoa noho ny maritrano macro-core, saingy tsy dia fantatro loatra izany.
Iza no nanoratra an'io? feno bibikely ... Hurd novolavola ho an'ny BSD? mitady 5 segondra ao amin'ny google ianao dia mahita vaovao milaza hoe "HURD dia novolavolain'ny FSF HO AN'NY SISTEMA GNU"
Raha vantany vao mivoaka i Hurd dia omeko lalana kely izy, miaraka amin'ny GNU / Freedo (linux-libre) Faly aho fa te hiala amin'ny kernel novokarin'Andriamatoa Torvals izay itiavako azy '. t mifanaraka amin'ny zavatra maro
Manantena ny voan'ny Hurd aho 🙂
Noooooooo, manantena aho fa nofinofy ity ary rehefa mifoha aho dia tsy tanteraka izany, mahamenatra raha nosoloin'i Hurd ny Linux, izany no antony nijanonako. Ny kernel tonga lafatra fotsiny io.
Heveriko fa tsy hanova Linux ho an'ny kernel tsy manohana ny USB akory i Debian amin'izao fotoana izao. Mbola lavitra ny lalan'i Hurd, ary somary miadana ny fampandrosoana.